လိပ်ပြာအဆို့ရှင်ဘယ်နှစ်မျိုးရှိသလဲ။ ဘယ်အလုပ်ကအကောင်းဆုံးလဲ - သတင်းများ - မှတ်တိုင်
Butterfly အဆို့ရှင်များသည်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးရှိပြီးထင်ရှားသောအားသာချက်များရှိသည်။ ၎င်းသည်မြင့်မားသောအပူချိန်၊ ဖိအားအမျိုးမျိုး၊ အဆို့ရှင်၏ကြီးမားသောအမည်ခံအချင်း၊ ခိုင်မာစွာမိမိကိုယ်ကိုသန့်ရှင်းရေးစွမ်းရည်နှင့်အဆို့ရှင်ကိုယ်ထည်ကိုကာဗွန်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုလေ၊ ရေ၊ ရေနွေးငွေ့၊ အမျိုးမျိုးသောမြေထုထည်များ၊ ရွှံ့များ၊ ရေနံ၊ ၎င်းကိုပိုက်လိုင်းဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်မောင်းနှင်ခြင်းအတွက်အဓိကအသုံးပြုသည်။ ယနေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လိပ်ပြာအဆို့ရှင်များကိုနည်းလမ်းများစွာဖြင့်ခွဲခြားလိမ့်မည်။
1. တံဆိပ်ခတ် pair တစုံ Non- သတ္တုပျော့ပျောင်းသောပစ္စည်းမှ Non- သတ္တုပျော့ပျောင်းပစ္စည်းရေးစပ်သည်
2. တံဆိပ်ခတ် pair တစုံ Non- သတ္တုပျော့ပျောင်းသောပစ္စည်းများမှ Hard သတ္တုပစ္စည်းများနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်
အဆိုပါတံဆိပ်ခတ် pair တစုံသတ္တု hard ပစ္စည်းမှ Hard သတ္တုပစ္စည်း၏ဖွဲ့စည်းထားသည်
၁။ elastic sealing butterfly valve - အဆို့ရှင်ပိတ်ထားသောအခါအဆို့ရှင်၏အဆို့ရှင်ဖိအားပေးမှုကြောင့်အဆို့ရှင်၏ဖိအားကိုတိကျစွာဖိအားပေးသည်။ အဆို့ရှင်ပိတ်သည့်အခါ၊
2. ပြင်ပ torque တံဆိပျလိပ်ပြာအဆို့ရှင်: တံဆိပျ၏တိကျတဲ့ဖိအားအဆို့ရှင်ရိုးတံမှလျှောက်ထားသည့် torque အားဖြင့်ထုတ်ပေးသည်။
(2) တံဆိပျကိုလိပ်ပြာအဆို့ရှင်ဖြည့်: အဆို့ရှင်ထိုင်ခုံသို့မဟုတ်အဆို့ရှင်ပန်းကန်ပေါ်နွေ ဦး တံဆိပျကိုဒြပ်စင်အားသွင်းခြင်းဖြင့်တံဆိပ်ခတ်၏တိကျတဲ့ဖိအားကိုထုတ်ပေးသည်။
(၃) Automatic sealing butterfly valve - တံဆိပ်ခတ်ခြင်း၏တိကျသောဖိအားကိုအလယ်အလတ်ဖိအားဖြင့်အလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်သည်။
(၁) Vacuum butterfly အဆို့ရှင်။ Butterfly အဆို့ရှင်သည်လေထုဖိအားထက်စာလျှင်ဖိအားနိမ့်သည်။
(2) အနိမ့်ဖိအားလိပ်ပြာအဆို့ရှင်။ အမည်ခံဖိအား PN <1.6Mpa နှင့်အတူလိပ်ပြာအဆို့ရှင်။
(3) အလတ်စားဖိအားလိပ်ပြာအဆို့ရှင်။ 2.5-6.4mpa ၏အမည်ခံဖိအား PN နှင့်အတူလိပ်ပြာအဆို့ရှင်။
(4) မြင့်မားသောဖိအားလိပ်ပြာအဆို့ရှင်။ 10.0-80.0mpa ၏အမည်ခံဖိအား PN နှင့်အတူ Butterfly အဆို့ရှင်။
(5) Ultra မြင့်မားသောဖိအားလိပ်ပြာအဆို့ရှင်။ အမည်ခံဖိအား PN> 100MPa နှင့်အတူ Butterfly အဆို့ရှင်။
(1) မြင့်မားသောအပူချိန်။ t> 450 ° C လိပ်ပြာအဆို့ရှင်။
(2) အလယ်အလတ်အပူချိန်လိပ်ပြာအဆို့ရှင်။ 120 C <450 နှင့်အတူလိပ်ပြာအဆို့ရှင်။
(3) ပုံမှန်အပူချိန်လိပ်ပြာအဆို့ရှင်။ 40C <120 ° C. နှင့်အတူလိပ်ပြာအဆို့ရှင်
(4) အနိမ့်အပူချိန်လိပ်ပြာအဆို့ရှင်။ 100 <40 ° C. နှင့်အတူလိပ်ပြာအဆို့ရှင်။
(5) အလွန်နိမ့်သောအပူချိန်လိပ်ပြာအဆို့ရှင်။ T က <100 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာလိပ်ပြာအဆို့ရှင် <
6ã€ connection mode အရ:
1. Wafer လိပ်ပြာအဆို့ရှင်
ညှပ်လိပ်ပြာအဆို့ရှင် Butterfly ပန်းကန်ကိုပိုက်၏အချင်းအားဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ အဆို့ရှင်အပြည့်အဝပွင့်လင်းသည်။
wafer butterfly အဆို့ရှင်၏ဖွဲ့စည်းပုံသည်ရိုးရှင်းပြီးအသံအတိုးအကျယ်မှာသေးငယ်။ အလေးချိန်ပေါ့သည်။ Butterfly အဆို့ရှင်သည်တံဆိပ်ခတ်ခြင်း (၂) မျိုးရှိသည်။ elastic တံဆိပ်ခတ်အဆို့ရှင်, တံဆိပ်ခတ်လက်စွပ်အဆို့ရှင်ကိုယ်ထည်တွင် embedded သို့မဟုတ်လိပ်ပြာပန်းကန်နှင့်တွဲနိုင်ပါတယ်။
Flange butterfly အဆို့ရှင်သည်ဒေါင်လိုက်ပြားဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်ပြီး၊ အဆို့ရှင်ပင်မသည်သတ္တုခိုင်မာသောမာကျောသောအဆို့ရှင်ဖြစ်သည်။ အဆို့ရှင်၏တံဆိပ်ခတ်လက်စွပ်သည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သောဂရပ်ဖိုက်ပြားနှင့်သံမဏိပြားများ၏ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်ပြီး၊ အဆို့ရှင်ကိုယ်ထည်တွင်တပ်ဆင်ထားပြီး၊ လိပ်ပြာပန်းကန်၏တံဆိပ်ခတ်မျက်နှာပြင်ကိုသံမဏိဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ပျော့ပျောင်းသောတံဆိပ်ခတ်အဆို့ရှင်၏တံဆိပ်ခတ်ကွင်းကို NBR မှပြုလုပ်ထားပြီးလိပ်ပြာပန်းကန်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။
3. Lug လိပ်ပြာအဆို့ရှင်
4. Welded လိပ်ပြာအဆို့ရှင်
ဂဟေဆော်ခြင်းလိပ်ပြာအဆို့ရှင်သည်ပိုက်လိုင်းတွင်အလတ်စားအပူချိန် ၃၀၀ ၃၀၀ နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ၊ သတ္တု၊ သတ္တုတွင်းနှင့်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုတွင် ၀.၁MPMP ဖိအားဖြင့်လေလုံသောလိပ်ပြာအဆို့ရှင်ဖြစ်သည်။ အလယ်အလတ်အရည်အသွေးကိုချိတ်ဆက်ရန်၊ ဖွင့်ရန်နှင့်ပိတ်ရန်သို့မဟုတ်ညှိရန်။
နောက်တစ်ခု:ညှပ် butterfly အဆို့ရှင်တပ်ဆင်ဘို့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ